Madaxweyne obama oo baajiyay kulan uu la yeelan laha dhigiisa dalka Filipiin ka dib markuu aflagaadeeyay.. - iftineducation.com
Madaxweyne obama oo baajiyay kulan uu la yeelan laha dhigiisa dalka Filipiin ka dib markuu aflagaadeeyay..
iftineducation.com – Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa hakiyay inuu la kulmo Madaxweynaha dalka Philippine, Rogrigo Duterte kaasoo noqon lahaa kulankii ugu horeeyay, sida uu sheegay Afhayeenka Aqalka Cad, saacado ka dib markii hogaamiyaha Philippine si shakhsi ah u aflaageedeeyay Obama.
Duterte ayaa ugu yeedhay Obama wiil hooyadiis jirkeeda ka ganacsato, isagoo sheegay in uu waxba ka dhageesaneenin hogaamiyaha Maraykanka haduu soo hadal qaado xuquuqda aadanaha, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP.
Aflagaadada Duterte ayaa ku soo aaday ka hor kulan ay yeelan lahaayeen madaxweynaha Mareykanka iyo dhigiisa Filipiin kaasoo la qorsheenayay in looga wada hadlo arimaha xuquuqda aadanaha.
Madaxweynaha dalka Filibiin ayaa shir saxaafadeed dhexdiis lagu suaalay sida uu u arko kulanka uu la yeelanayo Madaxweynaha Maraykanka Obama, haddii uu ku canbaareeyo dagaalkiisa ka dhanka ah dadka ka ganacsada daroogada, kuwaas oo inta hadda la diley ay marayaan 2400 mudo laba bil ah gudahood.
Duterte oo ka jawaabay ayaa yiri “waa in uu ixtiraam lahaada wiilka hooyadiis jirkeeda ka ganacsato isago marka ula jeeda Obama waxaan kuugu aflagaadeenaya shirkaasi ayuu yiri.
Si kastaba ha ahaatee, hadal uu soo saaray Madaxweynaha Philippine taladadii ayuu muujiyay inuu ka qoomamaynayo aflagaadadii ka dhanka ah dhigiisa Mareykanka.
Haddii Biyaahaga Durba Soo Boodaan Habkaan Adeegso xiliga Galmada 40 daqiiqo ayaa howsha sii wadaysaaye
Magaalada Galkacyo Qeybta Galmudug oo maanta qaadka ka dagay iyo Puntland ay ka dagtay Diyaarad qaad siday..